Huawei Mate 30 sy 30 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Vaovao momba ny gadget
Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro: havaozina ny avo lenta
Herinandro vitsivitsy lasa izay ny marika dia nanamafy azy tamin'ny fomba ofisialy. Androany 19 septambra Ny Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Nisy hetsika fampisehoana natao tany Munich izay nahafahanay nahafantatra ny fiafarana vaovao farany an'ny marika sinoa. High-end matanjaka sy voatendry ho fahombiazana vaovao ho an'ny mpanamboatra.
Tao anatin'izay herinandro izay dia nisy ny tsaho sy ny fanamarihana isan-karazany momba ny Huawei Mate 30, saingy farany androany dia afaka nahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ity faritra vaovao an'ny orinasa ity izahay. Toy ny mitranga amin'ny taranaka rehetra, mamela antsika amin'ny fanatsarana miavaka ny orinasa, indray eo amin'ny sehatry ny sary dia misy fiovana.
Ny famolavolana ireo telefaona roa ireo dia mbola mitohy hatramin'ny herintaona. Notch kilasika kokoa sy be feo kokoa no ampiasaina, na dia mahia kokoa aza izy amin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny raharaha Mate 30 Pro. Ka tsy dia manjaka loatra amin'ny efijery finday amin'io lafiny io. Ny maodely mahazatra dia mampiasa notch amin'ny endrika rano iray mitete. Aiza no ahitanao fanovana bebe kokoa dia ao ambadiky ny telefaona roa, miaraka amin'ny fomban'ny fakan-tsary misy azy ireo.
Ity no fivarotana Huawei lehibe indrindra manerantany, notokanana tany Madrid
1 Famaritana Huawei Mate 30
2 Famaritana Huawei Mate 30 Pro
Famaritana Huawei Mate 30
Izay aloha no ifantohantsikan ny telefaona manome anarana an'io faritra vaovao io avo ny marika sinoa. Modely tsara izy io, misy famaritana tsara ary mahafeno izay rehetra angatahinay amin'ny sehatra avo lenta anio. Tsy misy fitarainana amin'ity lafiny ity. Nisy fiheverana manokana ny fakàna sary amin'ny finday, araka ny hitantsika amin'ireo maodely avo lenta an'ny marika sinoa. Ireto ny masontsivana feno an'ny Huawei Mate 30:
Famaritana teknika Huawei Mate 30
modely Mate 30
Fitaovana hafa Fitaovana fakantsary eo amin'ny efijery
Famaritana Huawei Mate 30 Pro
Faharoa hitantsika ny telefaona mahery vaika indrindra amin'ity marika vaovao farany ambony an'ny marika sinoa ity. Ny Huawei Mate 30 Pro dia manana ny zava-drehetra ho iray amin'ireo telefaona be mpividy indrindra amin'ny volana ho avy. Izy io dia aseho amin'ny telefaona mahery, miaraka amina toetra teknika tsara, ary fakan-tsary tena tsara. Haavo avo lenta izay afaka manome ady be eny an-tsena. Ireto ny masontsivana feno nomarihiny, nohamafisin'ny orinasa mihitsy:
Famaritana teknika Huawei Mate 30 Pro
modely Mate 30 Pro
Operating System Android Open Source miaraka amin'ny EMUI 10 sy Huawei Mobile Services
efijery OLED 6.53 santimetatra ny habeny
Fakan-tsary aoriana 40 MP + 40 MP + 8 MP + 3D sensor lalina
Fitaovana hafa Fahafantarana ny tarehin-tànan'ny fakantsary / fankatoavana tarehy NFC / 3D ny sary
bateria 4.500 mAh misy fiampangana haingana 40 W ary famahanana tsy misy tariby
Ny Huawei Mate 30 dia mampiasa sensor triple aoriana ary ny maodely Pro dia mampiasa fakan-tsary efatra amin'ity tranga ity. Ny sensor dia ampiasaina no mihatsara. Ho fanampin'ny fanatsarana miavaka amin'ny resaka fandraisam-peo.Indrindra amin'ny fandraisam-peo miadana be, azo atao ny manoratra amin'ny 7680 fps amin'ity modely Pro ity.Amin'izany fomba izany dia mihoatra ny mpifaninana rehetra aminy izy, mampiseho indray fa ny orinasa dia resahina eo amin'ny sehatry ny fakana sary an-telefaona.
Ankoatry ny famelana anay ny angona rehetra momba ny mombamomba azy dia nizara ihany koa ny marika sinoa ny angona fandefasana amin'ireo Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro eny an-tsena. Telefaona roa ireo izay antsoina hiteraka liana betsaka amin'ny tsena. Ka ny fahafantarana hoe oviana izy ireo no natomboka ary ohatrinona no vidiny dia ny fampahalalana izay andrasana fatratra. Ny telefaona roa dia havoaka amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny telovolana fahaefatra amin'ity taona ity. Daty eo anelanelan'ny faran'ny volana oktobra sy novambra no dinihina, saingy antenaina fa hivoaka ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny angona rehetra. Ka holazainay aminao bebe kokoa rehefa misy angona momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro: havaozina ny avo lenta
Ahoana ny fomba hisorohana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana tsy hahatratra ny boaty mailakao
Ahoana ny fametrahana iOS 13 na iPadOS amin'ny iPhone na iPad anao